radio automation [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ် > အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာပညာ > radio automation
View Full Version : radio automation
ကျွန်တော်သိတဲ့ Radio automation ဆိုတာ ဖမ်းယူရရှိတဲ့ Signal တစ်ခုကို feedback control loop ထဲမှာ stable ဖြစ်တဲ့အထိ
အကြိမ်များစွာပတ်ခိုင်းထားတာပါပဲ။ radio automation ၄မျိုးရှိပါတယ်။ ဒီထက်ပိုချင်လည်းပိုမှာပေါ့။ ကျွန်တော်မသိဘူးဗျ။ ;D
အဲဒီ ၄မျိုးက ၁) automatic frequency control system၂) automatic phase control system ၃) system of temporary escort
4) system angular escort ။ ၁) နဲ့ ၂) ကတော့ရှင်းပါတယ်။ ၃) က signal ရဲ့ delay time ကို tracking လုပ်တာပါ။ ၄) က signal ရဲ့
direction ကို tracking လုပ်တာပါ။ ကျန်နေသေးတဲ့ စနစ်တွေရှိရင်လည်း ၀င်ဆွေးနွေးကြပါ။ မှားနေရင်လည်းပြင်ပေးကြပါ။ ဒါမှမဟုတ်
ဒီ ၄ခုထဲကနေလည်းဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်လည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ :)
ဟောဗျာ.. ဘယ်သူမှလည်း မဆွေးနွေးကြဘူး..။ ::)
အဲလိုလဲမဟုတ်ပါဘူးဗျ.. ဆွေးနွေးမယ့်လူတွေမရောက်သေးတာနေမှာပါ .. သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်သူတွေ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးကြမှာပါ.. ;D
ဆွေးနွေးချင်ပေမဲ့ မသိဘူးလေ ... :P :P :P
ကျနော်မသိတာလေးတခုကို ရှင်းပြပေးပါလား ။ [b]Jamming station [b] ဆိုတာကဘာလဲ ။ ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ အသုံးပြုသလဲ ။
frequency ဘယ်လောက်ရှိလဲ ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ရှင်းပြပါဦး ။။
( မိုးဇက် )
05-09-2008, 07:12 PM
ဖိုရမ်အတွက် နည်းပညာပိုင်းလေးတွေမျှဝေတာ ကျေးဇူးပါအစ်ကို.... :)
ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောပြမယ်ဗျာ။ Jamming station ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ ဆက်သွယ်မှုဧရိယာဖြတ်တောက်တဲ့အရာပါ။ cell phone တွေရဲ့ cell area နှစ်ခုကြားမှာထားပါတယ်။ cell phone ရဲ့ frequency အတိုင်း ထုတ်လွှင့်ပြီး power ကိုတော့ပိုများသုံးပါတယ်။ တနည်းပြောရင် ဖိလိုက်တဲ့သဘောပါ။ ကျွန်တော်တို့ hand phone တွေမှာ ပြောတဲ့ frequency နဲ့ နားထောင်တဲ့ frequency နှစ်မျိုး သုံးပါတယ်။ တစ်ခုကို ဖိထားနိုင်ရင်ဆက်သွယ်မှုပြတ်ပါပြီ။ သိပ်ကောင်းတဲ့ Jamming station တွေက dual mode, tri mode ဖုန်းတွေရဲ့ network တစ်ခုလုံးကိုထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာတွေမှာ အသုံးပြုသလဲဆိုတော့ စစ်ဖက်နဲ့ရဲဖက်မှာ အသုံးများကြပါတယ်။ နယ်ဖက်မှာဆိုရင်တော့ တည်းခိုခန်းနဲ့ ဟော်တယ်တွေမှာ သုံးမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ရဲ့အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ဖုန်းတွေကို ဈေးကြီးကြီးနဲ့ဆက်စေချင်လို့ပါပဲ။ frequency ဘယ်လောက်လဲဆိုတာတော့ ပြောရခက်ပါတယ်။ HF,VHF,UHF,CDMA,TDMA, etc
အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အင်း.. ပြောရဦးမယ် ။ တကယ်တော့ ဒါက radio automation နဲ့တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်ဘူးဗျ။ transmission လုပ်တဲ့
ဆက်ရေးဗျာ။ ဆွေးနွေးမယ့်လူ မရှိဘူးဆိုပြီး ဆက်မရေးပဲ မနေပါနဲ့ဗျာ။ ကိုအံ့မင်းညိုရေးထားသလောက် က ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်။ ကျန်တာလေးတွေ ဆက်ရေးပါဦး။ ကျွန်တော် စိတ်ဝင်းစားပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ အင်တင်နာ အကြောင်းတွေ လေ့လာဖူးပါတယ်။ ဆက်ရေးပါဗျာ။
min zar ni
ကို အံ့မင်းညို ရေ နံပါတ် ( ၁) နဲ့ပက်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားပါ တယ်....ဆက်ပြီးတော့ သိတာလေးတွေ မျှဝေပါ အုံး....နောက်ပိုင်းမှာ...ကောင်းကောင်းဝင်ဆွေးနွေးနိုင်အောင်...စာများများဖတ်နေပါတယ်.....
အစ်ကို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ကိုအံ့မင်းညို..........
ကျွန်တော်က လားရှိုးနည်းပညာတက္ကသိုလ် မှာ B-Tech Yr2Electronics တက်နေတယ်ဗျ............
ပညာလေးဘာလေးမှဝေပေးပါဦး သင်ပေးပါဦးဗျ......................ကျွန်တော် အားကိုးပါတယ်.....................
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကူညီပါဦး..............ကျွန်တော့ကို စာအကြောင်းပေအကြောင်း email ပို့ပေးမယ်ဆိုရင် တော့
်thurahtoon@gmail.com ကို ပို့ပေးနော်အစ်ကို...........................
07-04-2008, 07:12 PM
open loop နဲ့ close loop အကြောင်းပြောကြရအောင်ဗျာ။ အရင်ဆုံး control engineer တစ်ယောက်သိရမှာက system ဆိုတာဘာလဲ။ IEEE ရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်မှာတော့ system ဆိုတာ တစ်ပိုင်းချင်းဆီအလုပ်လုပ်လို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေးတွေပေါင်းထားတာပါတဲ့။ system ဆိုတဲ့စာလုံးမှာ physical,biological,organizational,နဲ့ အခြားသောအစိတ်ပိုင်းများပါဝင်ပါတယ်တဲ့။ system engineering မှာ system ဆိုတဲ့စာလုံးက အဲဒီက လာတာပါတဲ့။ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့် feedback control system ဆိုတာလည်း system engineering နဲ့သူ့ရဲ့ အသုံးချမှုအပိုင်းတွေပါပဲ။ စဉ်းစားကြရအောင်ဗျာ။ open loop ဆိုတာဘာလဲ။ system တစ်ခုရဲ့ output က input မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင် open loop ပါပဲ။ ဥပမာ..လျှပ်စစ် မီးဖိုးတစ်ခုမှာ လူတစ်ယောက်က ခလုတ်ကိုဖွင့်မယ်။ ၁ အဆင့်ကိုဖွင့်ရင်အပူနည်းနည်းရမယ်။ ၂ ဆိုရင်ပိုပူမယ်။ ထွက်လာတဲ့အပူက ပြန်ပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိတဲ့အတွက် အဲဒီစနစ်ကို open Loop လို့ခေါ်ပါမယ်။ ဒါဆို close loop က system တစ်ခုရဲ့ output က input မှာပြန်ပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရမယ်ပေါ့။ ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲ။ မော်တော်ကားမှာရှိတဲ့ steering က close loop feed back system ပါပဲ။ လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ မြှားတုံးတွေက reference input ဖြစ်မယ်။ ကားမောင်းသူရဲ့မျက်လုံးက တကယ့် output နဲ့ လိုချင်တဲ့ output ကိုချိန်ညှိပေးမယ်။ မျက်လုံးကနေ ဦးနှောက်ကို signal လွှတ်မယ်။ ဦးနှောက်က လက်ကို လက်ရှိ direction output နဲ့ desire direction output ကို ကိုက်ညီအောင်ချိန်ပြီး steering ကိုလိုအပ်သလိုလှည့်ပေးရမယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစနစ်က closed loop စနစ်ရဲ့အရိုးရှင်းဆုံး ဥပမာဖြစ်ပါတယ်။ radio automation မှာလည်း ဒီလို
သဘောရှိတဲ့ close loop feedback system တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
feedback control system ဆိုတာလည်း system engineering နဲ့သူ့ရဲ့ အသုံးချမှုအပိုင်းတွေပါပဲ။ စဉ်းစားကြရအောင်ဗျာ။ open loop ဆိုတာဘာလဲ။ system တစ်ခုရဲ့ output က input မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင် open loop ပါပဲ။ ဥပမာ..လျှပ်စစ် မီးဖိုးတစ်ခုမှာ လူတစ်ယောက်က ခလုတ်ကိုဖွင့်မယ်။ ၁ အဆင့်ကိုဖွင့်ရင်အပူနည်းနည်းရမယ်။ ၂ ဆိုရင်ပိုပူမယ်။ ထွက်လာတဲ့အပူက ပြန်ပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိတဲ့အတွက် အဲဒီစနစ်ကို open Loop လို့ခေါ်ပါမယ်။ ဒါဆို close loop က system တစ်ခုရဲ့ output က input မှာပြန်ပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရမယ်ပေါ့။ ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲ။ မော်တော်ကားမှာရှိတဲ့ steering က close loop feed back system ပါပဲ။ လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ မြှားတုံးတွေက reference input ဖြစ်မယ်။ ကားမောင်းသူရဲ့မျက်လုံးက တကယ့် output နဲ့ လိုချင်တဲ့ output ကိုချိန်ညှိပေးမယ်။ မျက်လုံးကနေ ဦးနှောက်ကို signal လွှတ်မယ်။ ဦးနှောက်က လက်ကို လက်ရှိ direction output နဲ့ desire direction output ကို ကိုက်ညီအောင်ချိန်ပြီး steering ကိုလိုအပ်သလိုလှည့်ပေးရမယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစနစ်က closed loop စနစ်ရဲ့အရိုးရှင်းဆုံး ဥပမာဖြစ်ပါတယ်။ radio automation မှာလည်း ဒီလို
Thx Bro ! ဒါဖတ်ပြီး နည်းနည်းစဉ်းစားလိုက်ရသေးတယ် ... ဒါဆို Bro ပြောထားတဲ့ open loop နဲ. Close loop က စု နားလည်သလိုဆို Feedback ပြန်မလာရင် Open Loop ... Feedback ပြန်လာရင် Close Loop. အဲလိုလား ... (မှားတာရှိ . ၀န်ဒါမိပါ ခင်ဗျ) ... ;)